४ आषाढ २०७५, सोमवार | Jun 18, 2018 | 09:18:10
By radiojanakpur on	 May 28, 2017 अर्थ-वाणिज्य
कुरिलो एक बहुवर्षिय तरकारी बाली हो । यो कलिलो टुसा को लागि खेती गरिन्छ । यसको बोटलाई फर्न, जरालाई क्राउन र खाने भागलाई स्पेयर भनिन्छ । यो एस्पारागेसी परिवार अन्तर्गत पर्दछ । यसको वैज्ञानिक नाम ‘एस्पारागस अफिसिनालिस’ हो । यसको भाले र पोथीको छुटटा छुटटै बोट हुने गर्दछ । भाले बोटबाट निस्कने टुसाहरु केही मसिना भएपनि पोथी बोटको तुलनामा बढी उत्पादन दिन्छन् । कुरिलोलाई एक पटक लगाएपछि कम्तिामा २० वर्षसम्म उत्पादन लिइरहन सकिन्छ । यसको उत्पति मध्य–एसिया, रुस तथा उत्तरी युरोपमा भएको मानिन्छ ।
जग्गाको छनौट ”
नर्सरीमा बीउबाट बेर्ना उत्पादन गर्ने तरिका ः
कम्पोष्ट मल ३० मे. टन, युरिया १०० किलो, डिएपी ६० किलो र म्युरेट अफ पोटास ६० किलो प्रति हेक्टर प्रतिवर्षको दरले पटक–पटक गरी माटोमा दिनुपर्दछ । विरुवालाई फस्फोरसको आवश्यकता अधिक पर्ने भएको हुनाले रोप्ने बेलामा प्रतिबोट २०–२५ ग्राम हडडीको धुलो दिनु राम्रो मानिन्छ । यसका आलाबा विरुवालाई सोडिएम तत्व बढी मात्रामा चाहिने भएको हुँदा प्रतिवर्ष एक बोटमा ५ ग्रामको दरले नुन हाल्नुपर्दछ । अतः रोपेको दोस्रो वर्षदेखि प्रत्येक बोटलाई करिब १.५ –३ किलोसम्म कम्पोष्ट मल र माथि सिफारिस गरिएको मात्राको आधारमा रासायनिक मल दिनुपर्दछ । कुरिलोलाई मल दिने उपयुक्त समय जाडो महिनाको अन्त्यतिर हो तर नाईट्रोजनको दुईभाग मध्ये दोस्रो मात्रा बालाी लिईसकेपछि तुरुन्तै दिनुपर्दछ ।
तर बागवानी अनुसन्धान केन्द्र, मालेपाटन पोखराको १० वर्षको अनुभवमा बिना रासायनिक मल र नुन नराखिकन पनि कुरिलो खेती सफलतापूर्वक गर्न सकिन्छ भनेर प्रमाणित भएको
कुरिलोको जातहरु :
आवश्यक विरुवाको सँख्या प्रति हेक्टर ः
गोडमेल : कुरिलो बहुबर्षिय बाली भएकोले झारपातहरु पनि बहुबर्षिय प्रकारकै बढी हुन्छन् । त्यसैले समय समयमा गोडमेल गरिराख्नुपर्दछ ।
टुसा का्टने तरिका ः साधारणतया कुरिलो टुसाको उत्पादन दोस्रो वर्षदेखि सुरु हुन थाल्दछ । कुरिलो एक पटक लगाएपछि २० वर्षसम्म उत्पादन लिन सकिन्छ । सामान्यतया टुसाको उचाई १५–२० सेमी भएपछि धािरलो चक्कुले करिब ४–५ सेमी माटो भित्रैबाट काटेर निकाल्नुपर्दछ ।
१. कुरिलो सिन्दुरे रोग : यो रोग पक्सिनिया नामको ढुसीद्धारा लाग्ने गर्दछ । यसको मुख्य लक्षण डाँट र हाँगाहरुमा साना, राता तथा पहेँला रँगका थोप्लाहरु देखिन्छन् । १ लिटर गाईको पिसाब ८–१० भाग पानीमा मिलाई छरेमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
२. कुरिलो ओइलाउने रोग : यो रो फयुजारियम् नामक ढुसीबाट लाग्ने गर्दछ । यो रोग लागेको विरुवा पहेँलो खैरो तथा रँग उडेको जस्तो देखिन्छ । यसको नियन्त्रण गर्न स्वस्थ्य नर्सरीका विरुवा प्रयोग गर्ने, पानीको निकास राम्रो गर्ने । यसका जिवाणुहरु माटोमा बस्ने भएको हुँदा रोगी माटोमा खेती गर्नु हुँदैन ।
१. कुरिलोको खपटे कीरा : यसको माउ तथा बच्चा (ग्रुब) ले काण्ड र पातमा खाएर नोक्सान पुरयाउदछन् । यसको नियन्त्रणको लागी कीराको आक्रमण देखिने वित्तिकै नुमान २ मि.लि. प्रतिलिटर पानीका दरले पात तथा काण्ड भिज्ने गरी छर्नु पर्दछ ।
२. झुसिलकीरा : यसले विरुवाहरुको हाँगाविँगालाई खाएर नोक्सान पुरयाउँदछ । यसको नियन्त्रण गर्न नुभान २ एम एल प्रतिलिटर पानीमा राखी बोटमा छर्नुपर्दछ ।